नेपाल र भारतबाट ५ घन्टामा १७०० पटक कार्ड घोटेर ह्याकरले चोरे नेपाली बैंकको साढे ३ करोड
आईतवार, भाद्र १५, २०७६ साल,
काठमाडौं । चिनियाँ ह्याकरहरुले ५ वटा नेपाली बैंकको डाटा ह्याक गरेर ५ घन्टामै ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ चोरेका छन् । शुक्रबार मात्रै चीनबाट काठमाडौं आएका ह्याकरहरुले शनिबार दरबारमार्ग र ठमेल क्षेत्रका एटीएम बुथबाट ७०० पटक एटीएम कार्डको प्रयोग गरेर १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ चोरी गरेका छन् ।
त्यसैगरी, भारतका विभिन्न ठाउँबाट १००० पटक एटीएम कार्डको प्रयोग गरेर १ करोड ५ लाख भारतीय रुपैयाँ चोरी गरेका छन् ।
‘नेपाल र भारतमा गरी १७ सय पटक कार्डको प्रयोग गरेर साढे ३ करोड रुपैयाँ चोरी भएको पाइएको छ,’ राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्रले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘नविल बैंकका कर्मचारीहरुको चलाखीका कारण समयमै प्रहरीलाई खबर हुँदा ठूलो क्षति हुन पाएन ।’
२/४ घन्टा मात्रै थाहा नभएको भए अर्ब बढी रकम चोरी हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । ‘ह्याकरहरुको गिरोह ठूलो संख्यामा चोर परिचालन गरेको देखिन्छ,’ मिश्रले भने, ‘कम्तिमा पनि १०० जनाभन्दा बढी चोर परिचालन भएको अनुमान छ ।’ चीनमा योजना बनाएर चोरहरु नेपाल र भारत गएका थिए ।
‘चीनमै बसेर नेपाली बैंक लुट्ने योजना बनाएको देखिन्छ,’ महानगरीय अपराध परिसर टेकुका डीएसपी होविन्द्र बोगटीले भने ।
ह्याकरहरुले प्रभु, एनआइसी एसिया, जनता, ग्लोबल आइएमइ, सनराइज बैंकको एटीएम कार्ड र नबिल, नेपाल एसबिआइ र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एटिएम बुथ प्रयोग गरेका छन् ।
यस विषयमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ५ सदस्यी अध्ययन समिति गठन गरिसकेको छ । व्यक्तिको खाताबाट पैसा झिकेको पाइएको छैन । बैंकको एटीएम बुथमा रहेको रकम मात्रै चोरी भएको हो ।
शनिवार दिउँसो करिब ४ बजेतिर प्रभु बैंकका एक कर्मचारीको फोनले प्रहरी झस्कियो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोली दरबारमार्गमा रहेको एटिएम बुथतिर लाग्यो।
२४ घन्टाभित्र राजधानीका सबै एटीएम रित्याउने योजना थियो चिनियाँ ह्याकरहरुको, मात्र एक मिनेटले जागियो
राष्ट्र बैंक भन्छ, तपाईंको खाताबाट पैसा हराएको छैन, ह्याकरले कस्को खाताबाट निकाले त पैसा ?
नेपाली बैंकमा चिनियाँ ह्‍याकरको आक्रमण ! एकै रातमा अर्बौं लुट्ने योजना असफल
नेपालका कम्तिमा ६ बैंकको प्रणाली ह्याक, पाँच चिनियाँ पक्राउ, अधिकांश बैंकका एटीएम सेवा बन्द